အ.ထ.က (၂) အင္းစိန္မွ ဆဌမတန္းေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းဆင္ခ်ိန္၌ လူတစ္ဦးက ခိုးယူ ေခၚေဆာင္သြားေသာ္လည္း ကေလးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ
`သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆရာ ဆရာမေတြ မိဘေတြ လက္လွမ္းမီသေလာက္ သတိေပးရတာ ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ ကေလးေတြအတြက္ စိတ္ပူလို႔´
ကေလးသူခိုးကိစၥကလည္း စိတ္မေအးရျပန္ဘူး။ ငါတို႔အင္းစိန္မွာ ေတာင္လာခိုးရဲတယ္။ မမိလို႔မိရင္အေသဘဲ။
နာမည္ၾကီးစာေတာ္တဲ ႔ေက်ာင္း အထက၂အင္းစိန္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ေမာင္ေယာရႈ ဆဌမတန္း က ေက်ာင္းသားဘုရားကယ္လို႔အိမ္ျပန္ေရာက္လာတယ္ သူကိုေမးေတာ့သူကေျပာျပတယ္
Credit : Samuel.
From : Phay Thet Aung fb.
အ.ထ.က (၂) အင်းစိန်မှ ဆဌမတန်းကျောင်းသားကို ကျောင်းဆင်ချိန်၌ လူတစ်ဦးက ခိုးယူ ခေါ်ဆောင်သွားသော်လည်း ကလေးမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ
`သူငယ်ချင်းတွေ ဆရာ ဆရာမတွေ မိဘတွေ လက်လှမ်းမီသလောက် သတိပေးရတာ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ကလေးတွေအတွက် စိတ်ပူလို့´
ကလေးသူခိုးကိစ္စကလည်း စိတ်မအေးရပြန်ဘူး။ ငါတို့အင်းစိန်မှာ တောင်လာခိုးရဲတယ်။ မမိလို့မိရင်အသေဘဲ။
နာမည်ကြီးစာတော်တဲ ့ကျောင်း အထက၂အင်းစိန်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့မောင်ယောရှု ဆဌမတန်း က ကျောင်းသားဘုရားကယ်လို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ် သူကိုမေးတော့သူကပြောပြတယ်